DAAWO: Sawirrada Weerarkii Shalay Ee Xerada Baar-Sanguuni Oo La Baahiyay + XOG CUSUB - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » DAAWO: Sawirrada Weerarkii Shalay Ee Xerada Baar-Sanguuni Oo La Baahiyay + XOG CUSUB
DAAWO: Sawirrada Weerarkii Shalay Ee Xerada Baar-Sanguuni Oo La Baahiyay + XOG CUSUB
Maktabka Warfaafinta ee Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta baahiyay sawirrada weerarkii shalay lagu qaaday xerada ciidanka Soomaalida ee Baar Sanguuni, Iyadoo sidoo kalena ay soo baxayaan faah-faahino dheeraad ah oo laga helayo weerarkaas.
Weerarkan oo ku bilawday Qarax Baabuur kuna xigay weerar toos ah ayey ciidamada Al-Shabaab ugu suuragashay in ay si buuxda ula wareegaan xerada, islamarkaana ay halkaas ku dilaan in ka badan 30 askari oo Jubaland ah.
Muuqaallada maanta la baahiyey ayaa lagu arkayaa dagaalyahannada Al-Shabaab oo si buuxda gacanta ugu haya xerada iyo difaacyadii Ciidanka Dawladda oo gubanaya, qiiqna ka baxayo.
Faafaahino dheeraad ah oo la helayo ayaa tibaaxaya in khasaaraha dhimasho ee ciidanka dawladdu uu kor u dhaafay 30 askari, sidoo kalena ay jiraan tobanaan dhaawacyo ah oo qaarkood iyagoo halis ah lagu daabulay diyaarado si loogu daaweeyo magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sidoo kalena xaqiijiyey in qaar ka mid ah meydadka ciidamada Jubbaland lagu soo bandhigay degmada Jamaame maalintii Shalay, halkaas oo ay isugu soo baxeen boqolaal dadweyne ah oo u daawasho tagay.
Sidoo kalena Waxay wararku sheegayaan in qaar ka mid ah ciidanka Jubbaland ay ku dhaceen gacanta Al-shabaab iyagoo maxaabiis ah, sidoo kalena ilaa hadda la baadi-goobayo ciidamo kale oo dhex jibaaxay jiinka webiga.
Saraakiisha dowladda iyo kuwa maamulka Axmad Madoobe ayaa ku andacooday in dagaalyahanada Al-Shabaab aysan u suuragalin qabsashada xerada balse muuqaalada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee Xarakada Al-Shabaab ayaa soo bandhigaya in ciidankooda oo si buuxda ula wareegay xerada, kana taagay raayada towxiidka.
Daawo Video: Melleteriga Baarma Oo Gubaya Tuulooyinka Muslimiinta Xasuuq Darrana Geysanaya.